Al Shabaab Oo Dib Uqabsaday Deegaano Dhanka Waqooyi Uga Beegan Magaalada Kismaayo.
Saturday July 22, 2017 - 12:09:44 in Wararka by Super Admin
Boqolaal katirsan ciidamada Xarakada Al Shabaab ayaa kulaalaya magaalada Kismaayo saacado kadib markii ay ka adkaadeen ciidamo huwan ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay kula dagaallamayeen dhul istiraatiiji ah.
Wararka ka imaanaya Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamo isbahaysi ah oo isugu jiray Mareykanka, Kenyaati iyo Itoobiya ay isaga baxeen deegaanka Buula Guduud oo qiyaastii 35 KM dhanka Waqooyi uga beegan magaalada xeebta leh ee Kismaayo.
Wariye Ku sugan Jubbooyinka ayaa SomaliMeMo khadka Taleefanka ugu sheegay in ciidamada huwanta ah shalay gelinkii dambe lagu sagootiyay qaraxyo iyo weeraro toos ah xilli ay marayeen deegaanka Yoontooy.
Jugta dhowr qarax ayaa laga maqlay wadada laamiga ah ee xiriirisa Kismaayo iyo Buula Guduud casar liiqii shalay, ciidamada oo lugeynaya ayaa xalay fiidkii gudaha ugalay Kismaayo waxayna wateen dhimasho iyo dhaawac kasoo gaartay qaraxyada.
Wararku waxay xaqiijinayaan in xoogaga Al Shabaab ay dib u qabsadeen sedax deegaan oo kala ah Buula Guduud, Yoontooy iyo Qaamqaamka oo dhammaantood ku teedsan wadada laamiga ee Kismaayo ka gasha dhanka magaalada Muqdisho.
Intii ay ciidamadan huwanta ah ku sugnaayeen Buula Guduud iyo Yoontooy ayay la kulmeen weerar khasaara badan lagu gaarsiiyay waxaana ugu darnaa weeraro ku qabsaday Yoontooy iyo Buula Guduud.